နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် DeltaFosB စားနပ်ရိက္ခာစစ်ကူတူရိယာဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် Motivation (2006) ထိန်းညှိ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အဆိုပါအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6စက်တင်ဘာလ 2006, 26 (36): 9196-9204; Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1124-06.2006
ပတေရုသ Olausson1, ဂျေဒါဝိဒ်သည် Jentsch2, နာတာလီ Tronson1, ရာခေလသည်အယ်လ် Neve3, အဲရစ်ဂျေ Nestler4နှင့် ဂျိန်း R. တေလာ1
1.စာပေးစာယူဂျိန်း R. တေလာ, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, Molecular Psychiatry, ဆေးပညာ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, Ribicoff သုတေသန်ဆောင်မှုများ, Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ, 34 ပန်းခြံလမ်း, New Heaven, CT 06508 ၏ဌာနခွဲမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လှုံ့ဆျောမှုအတွက် ALTER ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါအပါအဝင်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်၏ pathophysiology ်ပတ်သက်နေပါပြီ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အဆိုပါကူးယူနျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အချက်ΔFosB (NAc) နှင့် dorsal striatum သွေးဆောင်ဖို့လူသိများသည်, သက်ရောက်မှု dopamine-စညျးမဉျြးစညျးကမျးအချက်ပြအတွက် neuroadaptations အထောက်အကူပြုဖို့တွေးဆ. Little ကအစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ၏ dysregulation အတွက်ΔFosB၏တိကျသောပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းကိုသို့သော်လူသိများသည်။ ကျနော်တို့အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပစွမ်းဆောင်မှုနှင့်တိုးတက်သောအချိုးတုံ့ပြန်တိုးမြှင့်, ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤနေရာတွင် NAc အတွက်ΔFosB၏သွေးဆောင် overexpression နှင့် bitransgenic ကြွက်၏ dorsal striatum, ဒါမှမဟုတ်အထူးသကြွက်များ၏ NAc core ကိုအတွက်ပြသပါ။ , ဒါမှမဟုတ်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း - အလွန်ဆင်တူအပြုအမူသက်ရောက်မှုကိုကင်းမှယခင်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်စိတ်ကြွဆေး, MDMA [3,4-methylenedioxymethamphetamine (+)] တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ΔFosBအားဖြင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ၏အစွမ်းထက်စည်းမျဉ်းထုတ်ဖေါ်နှင့်, NAc core ကိုအတွင်းΔFosB၏ induction ကနေတဆင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲဆာပအပြုအမူအပေါ်စိတ်ခွန်အားနိုးလွှမ်းမိုးမှုများ၏သက်ရောက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားသည်။
ထပ်ခါတစ်လဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု (အနျူကလိယ accumbens အတွင်းတည်မြဲ neuroadaptations ထုတ်လုပ်ကြောင်းဗီဇကူးယူအတွက်ယာယီပြောင်းလဲနေသောပွောငျးလဲ (NAc) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်Nestler, 2004) ။ ဤသည်ကဦးနှောက်ဒေသ (မူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဝအားဖြည့်နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကယ်လီနှင့် Berridge, 2002), နည်းနည်းအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု nondrug အားဖြင့်လှုံ့ဆော်သောကူးယူအချက်များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်ဖြစ်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်အစာစားချင်စိတ်စစ်ကူ။ ΔFosB (နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့် NAc နှင့် dorsal striatum အတွင်း activated တစ်ဦးကူးယူအချက်ဖြစ်ပါသည်Konradi et al ။ , 1994; Nye et al ။ , 1995; ချန် et al ။ , 1997; Pich et al ။ , 1997; Shaw-Lutchman et al ။ , 2003) နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဘီး-running (Werme et al ။ , 2002) ။ ဒါဟာအစ (နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတော်ကြာပုံစံများကိုဤဒေသများတွင်သွေးဆောင်နေသည်Perrotti et al ။ , 2004) ။ striatal ΔFosB၏ induction နဲ့ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏တိုးမြှင်ကောင်းစွာတည်တတ်၏ (Kelz et al ။ , 1999; Colby et al ။ , 2003; Zachary et al ။ , 2006) ။ သဘာဝကစစ်ကူအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ဆာပအပြုအမူပေါ်ဤအကြောင်းဒေသများတွင်မွငျ့မားΔFosBအဆင့်ဆင့်၏အကျိုးဆက်များ, သို့သော်, လူသိများကြသည်မဟုတ်။
စွဲဖို့အကူးအပြောင်းဖြစ်စဉ်များအဖြစ်ဆာပတုံ့ပြန်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည် (dysregulated သို့မဟုတ်တရားရှိဖို့ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုမူးယစ်ဆေးဝါး-ယူပြီးအပြုအမူတစ်ခုလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်Jentsch နှင့်တေလာ, 1999; Berke နှင့် Hyman, 2000; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003; Everitt နှင့် Robbins, 2005) ။ အဆိုပါ NAc စွဲအဘို့ဆီလျော်မှုနှင့်အတူဆာပအပြုအမူမျိုးစုံကိုရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် (Balleine နှင့် Killcross, 1994; Corbit et al ။ , 2001; က de Borchgrave et al ။ , 2002; di Ciano နှင့် Everitt, 2004b; Everitt နှင့် Robbins, 2005) ။ ဒါဟာ NAc အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် neuroadaptations ဆာပလုပ်ရပ်တွေကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်ဖွယ်ရှိသည်။ အမှန်မှာနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့မှု (sucrose-အားဖြည့်ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းစေပါတယ်မိုင် et al ။ , 2004) နှင့်အစားအစာ-ဆုခခြံဆာပတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်, PKA ၏တားစီး (ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက) သို့မဟုတ်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်အပါအဝင် NAc core ကိုအတွင်း neuroplasticity ပိတ်ဆို့ဖို့စဉ်းစားထိန်းသိမ်းရေး (Baldwin et al ။ , 2002a; ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ NAc core ကိုလည်း (ဆာအပြုအမူအပေါ် conditional လွှမ်းမိုးမှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု mediatesပါကင် et al ။ , 1999; Corbit et al ။ , 2001; ခန်းမ et al ။ , 2001; di Ciano နှင့် Everitt, 2004a; Ito က et al ။ , 2004ΔFosBသော induction အားကောင်းထိုကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုအစားအစာ, ရေ, သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်စာစားချင်စိတ်ကိုစစ်ကူအဘို့အဆာပစွမ်းဆောင်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းငှါ, သိရပါအံ့), တစ်ဦး neurobiological အလွှာပေး။
ဤတွင်ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုဖြည့်စွတ်မျိုးရိုးဗီဇချဉ်းကပ် အသုံးပြု. အစားအစာ-လှုံ့ဆော်ဆာပအပြုအမူအပေါ်ΔFosB၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး: (1) ကို NAc အတွင်းΔFosB၏သွေးဆောင် overexpression နှင့် bitransgenic ကြွက်၏ dorsal striatum (NSE-tTA × TetOp-ΔFosB) နှင့် (2) overexpression အဆိုပါ NAc core ကိုအတွက်ΔFosB၏အထူးကြွက်များတွင်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်. ငါတို့သည်လည်းကင်း, စိတ်ကြွဆေး, (+) မှယခင်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုရှိမရှိအကဲဖြတ် - 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), သို့မဟုတ်နီကိုတင်း, ΔFosBတိုးမြှင့်ဖို့အစီရင်ခံအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားကို အသုံးပြု. အစားအစာ-အားဖြည့်တုံ့ပြန်ဆာနှင့် / သို့မဟုတ်လှုံ့ဆျောမှုမြှင့်တင်ရန်လို မူးယစ်ဆေး-အားဖြည့် Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်ပြသခဲ့ပြီးအဖြစ် (Horger et al ။ , 1990, 1992; Piazza et al ။ , 1990; Vezina et al ။ , 2002; မိုင် et al ။ , 2004) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဆာပအပြုအမူအပေါ်ΔFosB၏ persistent သက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ပြနှင့်ဤကူးယူအချက်စိတ်ခွန်အားနိုး function ကိုတစ်ဦးထိန်းညှိအဖြစ် NAc core ကိုလုပျဆောငျစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
စမ်းသပ်ဆဲနုံ Sprague Dawley ကြွက်ချားလ်စ်မြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း (ဝီလ်မင်တန်, MA) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ အထီး bitransgenic 11A ကြွက်တစ်အာရုံခံဆဲလျ-တိကျတဲ့ enolase (NSE) ဖော်ပြ homozygous Transgene ကြွက် -tTA tetracycline transactivator ပရိုတိန်း (လိုင်းတစ်ဦး) နှင့် TetOp (tetracycline-တုံ့ပြန်မှုကမကထ) -ΔFosB (လိုင်း 11) ဖော်ပြကြွက်အကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်မှဆင်းသက်လာကြသည် ဟူ. ၎င်း, အဆိုပါမိဘလိုင်းများ (တစ်ဦး outbred ရောထွေးနောက်ခံ (50% ICR နှင့် SJL × 50% C57BL6) ရက်နေ့တွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်ချန် et al ။ , 1998; Kelz et al ။ , 1999) ။ နှစ်ဦးစလုံး Transgene အတူတူပင်ဆဲလ်များတွင်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, (11) tTA အားဖြင့်မှတ်တမ်း activation ထိုကဲ့သို့သော doxycycline အဖြစ် tetracycline ပဋိဇီဝဆေး၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့် inhibited မဟုတ်ပါ (1): ဤရွေ့ကား bitransgenic 2A ကြွက်တဲ့အခါမှသာΔFosBဖော်ပြ။ ဤအကြွက်မှ doxycycline ၏အုပ်ချုပ်ရေး, အရှင်ΔFosB၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါမှာယာယီထိန်းချုပ်ကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်အတွင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုတားဆီးဖို့အသုံးပြုကြလိမ့်မည် အကယ်စင်စစ် doxycycline အုပ်ချုပ်ရေး (ΔFosBမရှိရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. ယိုစိမ့်စကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ချန် et al ။ , 1998; Kelz et al ။ , 1999) ။ သူတို့နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးများကΔFosBသော induction ၏ပုံစံကိုမှအလွန်ဆင်တူအဓိကအား dynorphin ပါဝင်သော striatal အာရုံခံ (NAc နှင့် dorsal striatum နှစ်ဦးစလုံး) ကိုကန့်သတ်ကြောင်းတစ်ခုစကားရပ်ပုံစံ, ဖော်ပြရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုမှတပါး, bitransgenic ကြွက်များ၏ 11A လိုင်း, ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်အဘို့ရွေးကောက်တော်မူခဲ့သည် ထိတွေ့မှု (Kelz et al ။ , 1999) ။ ထိုမှတပါး, ΔFosB၏ဤ striatal စကားရပ်များ၏အရေအတွက် (ယခင်က quantified ထားပြီးချန် et al ။ , 1998; Kelz et al ။ , 1999) ။ အဆိုပါကြွက်တက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်းမှာထုတ်လုပ်ပြီးနှင့်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်ယေးလ်အဆောက်အဦများတွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်ဝန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတလျှောက်လုံးအားလုံးကြွက်က "ချွတ်" ပြည်နယ်အတွက် TetOp-မောင်းနှင် Transgene ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လူသိများအခြေအနေများ, အဆိုပါသောက်ရေအတွက် 8 တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုμg / ml မှာအသက် 9-100 ရက်သတ္တပတ်သည်အထိ doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်6စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် ΔFosBစကားရပ်အကျယ်ချဲ့ဖြစ်လာသည့်အခါ doxycycline ချွတ်ရက်သတ္တပတ် (Kelz et al ။ , 1999) ။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက် (သူ့ဟာသူလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်သည့်, ပယ် doxycycline သာရှိပြီးပြည်ပမှအပေါ် littermate bitransgenic ကြွက်များ၏နှိုင်းယှဉ်ပါဝင်Kelz et al ။ , 1999; McClung နှင့် Nestler, 2003; Zachary et al ။ , 2006).
12 လေးနှင့်7မှာချွတ်: 007မှာအပေါ်တစ်ဦး 00 ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ (အလင်းအောက်မှာထိန်းချုပ်ထားအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအခြေအနေများအောက်တွင်; အားလုံးစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များအားလုံး (ကြွက်) သို့မဟုတ်အုပ်စုများအတွက် (လေးလှောင်အိမ်နှုန်းမှငါးကြွက်) ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် လေး) ။ သူတို့ဟာကအနည်းဆုံး7ဃမဆိုလေ့လာမှုမပြုမီအိမ်ရာအဆောက်အဦမှထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အဖြစ်တိရစ္ဆာန်များကြော်ငြာ libitum အားလုံးအချိန်များတွင်ရေမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အစားအစာမှကန့်သတ်လက်လှမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်အသုံးပြုမှုဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်အမျိုးသား Institutes နှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်းနှင့်ယေးလ်တက္ကသိုလ်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ကိုကင်း Hydrochloride [ကြင်နာစွာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု (NIDA) ကထောက်ပံ့ပေး] ဃ-စိတ်ကြွဆေး sulfate (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို), MDMA Hydrochloride (ကြင်နာစွာ NIDA ပေး) နှင့် (-) - နီကိုတင်းဟိုက်ဒရိုဂျင် tartrate (Sigma ) မြုံဇီဝကမ္မဆား (0.9%) အတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့်5ml / ကီလိုဂရမ် (ကြွက်) သို့မဟုတ်2ml / ကီလိုဂရမ် (ကြွက်) ၏အသံအတိုးအကျယ်မှာ intraperitonally ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါနီကိုတင်းဖြေရှင်းချက်၏ pH ဆေးထိုးမတိုင်မီဆိုဒီယမ်ဘိုင်နှင့်အတူချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်
ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည် (Carlezon et al ။ , 1998; Perrotti et al ။ , 2004) ။ တိုတိုမှာတိကျတဲ့ပရိုတိန်းကုဒ်သွင်း cDNAs အဆိုပါရေယုန် simplex virus ကို (HSV) amplicon HSV-PrPUC သို့ဖြည့်စွက်ခဲ့ကြနှင့်အထောက်အ 5dl1.2 သုံးပြီးဗိုင်းရပ်စ်သို့ထုပ်ပိုး။ တစ်ခုခုကို HSV-LacZ ၏စကားရပ်ကားမောင်းအဆိုပါ virus သယ်ဆောင်, ထိန်းချုပ်မှုပရိုတိန်းβ-galactosidase, ဒါမှမဟုတ် HSV-ΔFosBများအတွက် coding, ΔFosBများအတွက် coding, နောက်ပိုင်းတွင်စမ်းသပ် protocol ကိုအညီ NAc core ကိုသို့ထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 1 အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပစွမ်းဆောင်မှုနှင့်တိုးတက်သောအချိုးတုံ့ပြန်အပေါ်ယခင်အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကြွက်ကျပန်းငါးခုစမ်းသပ်အုပ်စုများ (ဎ = 9-10 / အုပ်စုတစ်စု) သို့ခှဲဝေခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအုပ်စုများ (intraperitoneally;9မှာ: 00 လေးနှင့် 5: 00 pm တွင်) နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ဆေးထိုးလက်ခံရရှိဆားသို့မဟုတ်အောက်ပါမူးယစ်ဆေးတွေထဲကနှင့်အတူ: နီကိုတင်း, 0.35 / ကီလိုဂရမ် mg; MDMA, 2.5 / ကီလိုဂရမ် mg; ကိုကင်း, 15 / ကီလိုဂရမ် mg; သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး, 2.5 မီလီဂရမ် / 15 ရက်ဆက်တိုက်ကီလိုဂရမ်။ အဆိုပါဆေးများ (ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ကထုတ်ဝေဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားသည့်ခဲ့ကြသည်တေလာနှင့် Jentsch, 2001; Olausson et al ။ , 2003), နှင့်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် locomotor ဆွကုသမှုရက်ပေါင်း 1 နှင့် 15 အပေါ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ ဆုတ်ခွာ၏5ဃပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များ 10 ရက်ဆက်တိုက်တုံ့ပြန်ဆာနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်နက်ဖြန်နေ့၌တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားပေါ်စမ်းသပ်ပြီးအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကဆာပတုံ့ပြန်မှုဆည်းပူးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်သုံးခုနောက်ဆုံးသင်တန်းတစ်ခုချင်းစီအပေါ်အဘယ်သူမျှမတစ်ခုထက် ပို. တက်ကြွလီဗာတုံ့ပြန်မှုအောင်, စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်ချက်2နှင့်3ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် bitransgenic ကြွက်တွေမှာΔFosB၏သွေးဆောင် striatal overexpression ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်နှင့်အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ်တုံ့ပြန်။ ဤအကြွက်တွေမှာΔFosB၏သွေးဆောင် overexpression ယခင်က locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်အကြိမ်ကြိမ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုတူတဲ့မှသရုပ်ပြနှင့် conditional ရာအရပျ preference ကို Paradigm (ထားပြီးKelz et al ။ , 1999; Zachary et al ။ , 2006) ။ ဤကြွက်တိကျတဲ့အမူအကျင့်ဖြစ်စဉ်များမှ striatal ΔFosBများ၏အလှူငွေနှင့် ပတ်သက်. အရေးပါသောသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်ပါသည်။ Genotyped အထီးကြွက် doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်သို့မဟုတ်အသက် 8 ရက်သတ္တပတ်မှာရေကိုအသာပုတ်မှ switched ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ချက် (Transgene စကားရပ်အကျယ်ချဲ့ဖြစ်သောအချိန်တွင် doxycycline ဆုတ်ခွာ၏6ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အစပျိုးခဲ့သည်Kelz et al ။ , 1999) ။ စမ်းသပ်မှု2များတွင်တိရစ္ဆာန်များ (ဎ = 16) အစားအစာ 10 ရက်ဆက်တိုက် (အောက်တွင်ကြည့်ရှု, တူရိယာဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နှင့်တိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်ခြင်း) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆာပလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ ဆာစမ်းသပ်ခြင်း၏ပြီးစီးပြီးနောက်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor ဆွကဤကြွက်များတွင်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 3, သီးခြားကြွက်အုပ်စု (ဎ = 18) တွင် 10 စစ်ကူဦးရေအများဆုံးကိုအပ်ခဲ့ပြီးသောကာလအတွင်းအခြေအနေများအောက်တွင် 50 ရက်ဆက်တိုက်များအတွက်ဆာပတုံ့ပြန်မှုအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တစ်ရက် 11 တွင်, အားလုံးကြွက်တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ တစ်ရက် 12 တွင်ကျနော်တို့တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ် prefeeding ခြင်းဖြင့်စစ်ကူတန်ဖိုးများ၏သက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။
စမ်းသပ်ချက်4နှင့်5အထူး NAc အတွင်းΔFosB၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု4ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ΔFosB overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဤတွင်, ကြွက် HSV-ΔFosBနှင့်အတူထုံမွှန်းခဲ့ကြ (ဎ = 8) သို့မဟုတ် HSV-LacZ (ဎ = 8) ကို NAc core ကိုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင် 40 ဇစတင်မနျဆာပလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ 10 နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများပြီးနောက်အခြေခံလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့် (အောက်တွင် Locomotor လှုပ်ရှားမှုကြည့်ပါ) locomotor လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများအားလုံးကိုတိရစ္ဆာန်များအဘို့အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု5တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ်အထူး NAc ΔFosB overexpression ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ ဤတွင်အဆိုပါကြွက်များပိုင်းတွင် NAc core ကိုအတွက် (15 ဎ =) သို့မဟုတ် HSV-LacZ (ဎ = 8),7ရက်ဆက်တိုက်လေ့ကျင့်သင်ကြားစမ်းသပ်အုပ်စုများဖို့တာဝန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် HSV-ΔFosBနှင့်အတူထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များအထွတ်အထိပ်မှΔFosBစကားရပ်ဘို့ခွင့်ပြု4ဃများအတွက် untested နှင့်တည်းကကုသမှုမရှိဘူးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ တစ်ရက်5တွင်ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်ကိုနှိပ်လီဗာအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ခြင်း၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ပြီးနောက်အားလုံးကြွက်သေဆုံးပြီးနှင့် NAc core ကိုအတွက်ပြုတ်ရည် cannulas ၏နေရာချထား histochemically မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ပြုတ်ရည် cannulas ၏နေရာချထားအပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်ဦးကိုကြွက်စမ်းသပ်မှု4နှင့်စမ်းသပ်မှု5ထံမှတဦးတည်းကြွက်မှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
မျိုးဗီဇစကားရပ်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေတိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအုပ်စုကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာ HSV-LacZ အဆိုပါ NAc core နဲ့တိရစ္ဆာန်များသို့ထုံမွှန်းခံခဲ့ရ3အကြာတွင်dဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ β-galactosidase ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးနောက်ပိုင်းတွင် immunohistochemically အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
Locomotor လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားမှုမီတာကို အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့သည် (Digiscan တိရိစ္ဆာန်လှုပ်ရှားမှုမော်နီတာ; Omnitech အီလက်ထရောနစ်, ကိုလံဘတ်, OH) ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုမီတာအနီအောက်ရောင်ခြည် photosensors နှစ်ခုအတန်းတပ်ဆင်ထားကြသည် 16 အာရုံခံကိရိယာ၏ပါဝင်သည်ဟုဦးချင်းစီတန်းစင်တီမီတာဆိတ်ကွယ်ရာ 2.5 တင်လိုက်တယ်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုမီတာကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့် Micropro software ကို (Omnitech အီလက်ထရောနစ်) သုံးပြီး PC မှာကွန်ပျူတာအားဖြင့်ကောက်ခံလှုပ်ရှားမှုမီတာကနေဒေတာတွေကိုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များလှုပ်ရှားမှုကိုမီတာထဲသို့သွင်းထားကြသည်ဟု (25 × 45 × 20 စင်တီမီတာ) ပွင့်လင်းပလပ်စတစ်ပုံးထဲမှာထည့်ထားခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကနဦး 30 မိများအတွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ပစ္စည်းကိရိယာများမှ habituate ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အချို့စမ်းသပ်ချက်များတွင်တိရစ္ဆာန်များနောက်ပိုင်းတွင်ထွက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းအရသိရသည်ကင်း, စိတ်ကြွဆေး, နီကိုတင်း, ဒါမှမဟုတ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူထိုးနှင့်နောက်ကျောပုံးသို့တင်လိုက်တယ်။ အဆိုပါ locomotor လှုပ်ရှားမှုထို့နောက် nonspecific ဆေးထိုး-သွေးဆောင် hypermotility ရှောင်ရှားရန်မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးပြီးနောက် 60 မိစတင်5မိဘို့မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက် (9 လေးနှင့် 00:6pm တွင် 00 ကြား) တိရစ္ဆာန် '' အလင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
ဆာ (30 × 20 × 25 စင်တီမီတာ) အ MedPC software ကို (Med Associates မှ, စိန့် Albans, VT) ကထိန်းချုပ်ထား (16 × 14 × 13 စင်တီမီတာ) သို့မဟုတ်ကြွက်ကြွက်များအတွက်စံ operating အခန်းများကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်ခဲ့သည်တုံ့ပြန်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့အဖြူရောင်ဆူညံသံမီးစက်နှင့်ပြင်ပဆူညံသံ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်ပန်ကာတပ်ဆင်အသံ-attenuating ပြင်ထရံအခန်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ကျောနံရံပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတစ်ဦးကအိမျတျောကိုအလင်းအခနျး illuminated ။ တစ်ဦးကတောင့်သာသနာ (20 သို့မဟုတ် 45 mg; Bio-စားသုံးခြင်း, Frenchtown, NJ) အစားအစာလုံးလေးများကယ်နှုတ်တော်မူ၏မဂ္ဂဇင်းသို့စစ်ကူအဖြစ်။ ဦးခေါင်း entries တွေကိုပုစစ်ကူ receptacle အထက်တွင်တပ်ဆင်ထားတစ် photocell နေဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤမဂ္ဂဇင်းအတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအလင်းဖြစ်၏။ ကြွက်အဘို့, တဦးတည်းလီဗာမဂ္ဂဇင်း၏တစ်ဦးချင်းစီဘက်မှာနေရာချပေးခဲ့သည်။ ကြွက်အဘို့နှစ်ခု nosepoke ခါ aperture (ထိုစစ်ကူမဂ္ဂဇင်းမှဆိုလိုသည်မှာဆန့်ကျင်ဘက်) အခန်း၏နောက်ကျောနံရံပေါ်မှာထားကြ၏။
အဆိုပါ5ချက်ချင်းသင်တန်းစတင်မှီ, တိရိစ္ဆာန်များတစ်နေ့လျှင်အစားအစာမှမိ access ကို 90 ဖို့ကန့်သတ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်စပါးကို-based အစားအစာလုံးလေးများနှင့်ထိတွေ့dစဉ်အတွင်း (ကြွက်, 20 mg; ကြွက်, 45 မီလီဂရမ်) မိမိတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ။ စမ်းသပ်ကာလအတွင်းအစားအစာလုံးလေးများအတွက်အမူအကျင့် protocol ကို (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အဖြစ်နေ့စဉ်စမ်းသပ်ခြင်း session တစ်ခုပြီးနောက် 90 မိစတင် 30 မိဘို့အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာန့်အသတ်ပမာဏအတွက်အဆိုအရအော်ပရေတာအခန်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်အစားအစာရရှိမှုဇယားကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီမွတ်မပြေနိုင်သောအချက်ရောက်ရှိဖို့တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းတိရိစ္ဆာန်ဘို့ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးနှင့်လက်အောက်ခံတိရိစ္ဆာန်များအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလျော့နည်းစေသည်။ ငါတို့လက်တွင်ဤအချိန်ဇယားကိုမှကနဦးကိုယ်အလေးချိန်ပြီးနောက်နှေးကွေးကိုယ်အလေးချိန်ဘို့ခွင့်ပြု ~အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးအလေး 85-90% ။ တိရိစ္ဆာန်အလေးစမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
အားလုံးဘာသာရပ်များပိုင်းတွင်2ဃများအတွက်စမ်းသပ်ယန္တရားမှ habituated ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဤအအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း, အစားအစာလုံးလေးများသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် 15 s ကို (FT-15) အချိန်ဇယားအပေါ်စစ်ကူမဂ္ဂဇင်းသို့အပ်ခဲ့သည်။ နက်ဖြန်နေ့၌အစ, အဘာသာရပ်များ 10 ရက်ဆက်တိုက်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စားစရာဘို့တုံ့ပြန်ယခင်ကထုတ်ဝေဆာအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် အခြေခံ. စမျးသပျခံခဲ့ရ (Baldwin et al ။ , 2002b) ။ အခြား (မလှုပ်မရှား) လီဗာ / nosepoke အပေါ်တုံ့ပြန်မပါ Programs အကျိုးဆက်များခဲ့သော်လည်းမှန်ကန်သောအပေါ်တုံ့ပြန် (ဆိုလိုသည်မှာတက်ကြွ) လီဗာ / nosepoke, အားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။ တက်ကြွစွာ nosepoke သို့မဟုတ်လီဗာ၏အနေအထား (လက်ဝဲ / ညာ) အားလုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများအတွက်မျှတတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်ပြီးစီး (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) တစ်ခုတည်းအစားအစာတောင့်များ၏ပို့ဆောင်မှုအားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင် 1 s ကိုနောက်တော်သို့လိုက်, မဂ္ဂဇင်းလှုံ့ဆော်မှုအလင်း၏စတင်ခြင်းခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကစက္ကန့်အကြာတွင်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအလင်းကိုပိတ်ထားခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအ 10 စစ်ကူလုံးလေးများဟာ variable ကိုအချိုး (VR1) အချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်ပြီးနောက်မရရှိနိုင်ခဲ့ကြရသောပြီးနောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုး (FR2) အချိန်ဇယားအတိုင်းတုံ့ပြန်၏အောင်မြင်သောပြီးစီးပြီးနောက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ အဲဒီ session 15 မိကြာ။
စမ်းသပ်ချက်3(ကြွက်) နှင့်5(ကြွက်) (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်) တုံ့ပြန်နောက်ဆက်တွဲတိုးတက်သောအချိုးအစားပေါ်လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏အလားအလာသက်ရောက်မှုရှောင်ရှားရန်အစားထိုးလေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု3များတွင်ကြွက် 1 ဃများအတွက် FR2 အချိန်ဇယားအပေါ်ပြီးတော့2ဃတစ်ခု FR8 အချိန်ဇယားအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ခြင်း၏ပထမဦးဆုံး3ဃ 60 မိအစည်းအဝေးများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။7စစ်ကူဝယ်ယူခဲ့သည့်အခါနောက်ဆုံး 50 လေ့ကျင့်ရေးရက်ပေါင်းတွင်, အဲဒီ session ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ နှစ်ခုခြွင်းချက်နှင့်အတူအခြားစမ်းသပ်မှုများအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့စမ်းသပ်မှု5များတွင်ကြွက်များ 1 မိအစည်းအဝေးများအတွက် FR2 / VR15 အချိန်ဇယားအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ 150 လုံးလေးများ / session ကိုတစ်ဦးအလုပျသအရေအတွက်ကိုကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာဤတိရိစ္ဆာန်များမဆိုစမ်းသပ်ကိုင်တွယ်မတိုင်မီတည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်များတည်ထောင်ခြင်းများအတွက်ခွင့်ပြုသင်တန်း (ဆိုလိုသည်မှာ5ဃစုစုပေါင်း) ၏ 15 နောက်ထပ်ရက်ပေါင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များကိုလည်းအားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်စားစရာဘို့တုံ့ပြန်အပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်စားနပ်ရိက္ခာရရှိရန်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်တစ်ခု FR1 အချိန်ဇယားအဖြစ်အစပျိုးခဲ့သည်ပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းတစ်နောက်ဆက်တွဲစစ်ကူ (ဆိုလိုသည်မှာ 2, 1, 3,5... X + ကို7တုံ့ပြန်မှု) ရရှိရန်2အားဖြင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုစမ်းသပ်မှုမှာအချိန်ဇယားကိုတဖြည်းဖြည်း 5, 1, 6, 11 ... X + ကို 16 ၏နောက်ဆုံးအချိန်ဇယားကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျော,5တိုးပွားလာခဲ့သည်။ အားလုံးကတခြား parameters များကိုအထက်အသေးစိတ်သင်တန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတူညီကြ၏။ အဘယ်သူမျှမတက်ကြွသောတုံ့ပြန်မှု5မိဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့သည့်အခါအဆိုပါစမ်းသပ်မှုရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။
စစ်ကူတန်ဖိုးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစစ်ကူ-တိကျတဲ့ prefeeding သုံးပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ ဤတွင်, ကြွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အားဖြည့်များ၏တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်စမ်းသပ်မတိုင်မီ3ဇစဉ်အတွင်းမိမိတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာန့်အသတ်စပါးကို-based အစားအစာလုံးလေးများစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များအီသနောတစ် pentobarbital ်အရောအနှော (35 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည် (183.6 / ကီလိုဂရမ် mg) (10% v / v) နှင့် propylene glycol (39% v / v) [Equithesin သုံးပြီး anesthetized ကြသည် ဟူ. ၎င်း, 4.32 ml / ကီလိုဂရမ်, ip] မှာအုပ်ချုပ်။ Cannulas (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ, ရော့, VA သို့) ခွဲစိတ် Kopf stereotactic ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု. ယင်း NAc core ကိုအထက်ရည်ရွယ်ထဲထညျ့ခဲ့သညျ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း bregma မှဆွေမျိုးအသုံးပြုသော stereotactic သြဒီနိတ်ခဲ့ကြသည်: anterior / posterior + 1.5 မီလီမီတာ; နှစ်ဦးနှစ်ဖက် / medial, ± 1.5 မီလီမီတာ; ventral / dorsal, -6.0 မီလီမီတာ (Paxinos နှင့် Watson, 1986) ။ အဆိုပါ cannulas screw နှစ်ခုနှင့်ပါးစပ်တွင်းဘိလပ်မြေသုံးပြီးဦးခေါင်းခွံမှကျောက်ချရပ်နားခဲ့ကြသည်။ Obturators ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လမ်းညွှန် cannulas သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များစံခွဲစိတ်မှုနောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်နှင့်မည်သည့်စမ်းသပ်ချက်များမစတင်မှီ5ဃများအတွက်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်၏ Intracerebral တာဟာ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) သင်တန်းကာလမတိုင်မီက 40 ဇမြန်မာနိုင်ငံသဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ injection ဆေးထိုးပိုက် (31 gauge), လမ်းညွှန် cannulas ၏အစွန်အဖျားကိုအောက်တွင် 1 မီလီမီတာတိုးချဲ့ / ဖြည်းဖြည်းလက်ဝဲနှင့်လက်ျာ NAc သို့တစ်ပြိုင်နက်တည်းလျှော့ချခဲ့သည်နှင့် 1.0 μl / ခြမ်း4μlတစ်ခုပြုတ်ရည်နှုန်းမှာတစ်ဦး 0.25 မိကာလအတွင်းထုံမွှန်းခဲ့သည် တစ်ဦး microinfusion စုပ်စက် (; ဟားဗတ်ယန္တရား, Holliston, MA PhD-5000) ကို အသုံးပြု. မိ။ အဆိုပါပြုတ်ရည်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်, ထို Dummy cannulas အစားထိုးခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်ပြုတ်ရည်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် 1 မိဘို့ရာအရပျ၌ကနျြခဲ့သညျ။ Cannula နေရာချထားမှုကို histologically (ပုံ။ 6B ကြည့်ပါ) အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်များပြီးစီးပြီးနောက်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်နှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်နေရာချ cannulas နှင့်အတူသာတိရိစ္ဆာန်များစမ်းသပ်အချက်အလက်များ၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
Histological ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် immunostaining ။
အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်များပြီးစီးပြီးနောက်စမ်းသပ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ခွဲစိတ်လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များ Equithesin နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်များနှင့်စံလုပျထုံးလုပျနညျးအရသိရသည် 0.1 မီတာ PBS (5 မိ) နှင့် 10% formalin (10 မိနစ်) နှင့်အတူ transcardially perfused ။ ဦးနှောက် formalin အတွက် postfixed နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးဖော့စဖိတ်-buffered sucrose ဖြေရှင်းချက် (30%) ၌ထားကြ၏။ အားလုံးဦးနှောက်ထို့နောက် microtome အပေါ် 40 μmကဏ္ဍများအတွက်ဖြတ် cannula နေရာချထားခြင်းနှင့်ပရိုတိန်းထုတ်ဖော် histological ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Cannula နေရာချထားအီသနောရေဓါတ်ခန်းခြောက်ပြီးနောက် distyrene ပလပ်စတစ်နှင့် xylene (DPX) တွင် slides ကြားနေအနီရောင်နှင့်အတူ counterstained ကဏ္ဍများအတွက် လုပ်. ဏုပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ Immunohistochemistry (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည်Hommel et al ။ , 2003) ။ (:; Biogenesis, Kingston, နယူးဟမ်းရှား 1 5000) ရေတိုမှာတော့ HSV-LacZ ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်β-galactosidase ၏စကားရပ်ဟာဆိတ် Anti-β-galactosidase မူလတန်း antibody ကို အသုံးပြု. နဲ့ Immunofluorescence အစွန်းအထင်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ နေ့ချင်းညချင်းပေါက်ဖွားပြီးနောက်ကဏ္ဍများနှင့်ဆေးခဲ့ကြသည်နှင့်အနောက်ပိုင်းတွင် Cy2 မှ conjugated တစ်ချောင်းမြည်း Anti-ဆိတ်သငယ်ကိုအလယ်တန်း antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီး (1: 200; Jackson က ImmunoResearch အနောက် Grove, PA) ။ ကဏ္ဍများကိုတဖန်အီသနောရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့် DPX အတွက် mounting ဆေးကြောခဲ့သည်။ ကပ်လျက်ထိန်းချုပ်မှုကဏ္ဍများကိုမူလတန်းပဋိ၏ပါဝင်မှုမရှိဘဲတူညီကုသခံခဲ့ရသည်။ နဲ့ Immunofluorescence တစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီး 520 nm မှာအကဲဖြတ်ခဲ့သည် Zeiss အတူတူညီထိတွေ့မှုအကြိမ်မှာဖမ်းမိ FITC filter ကိုများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုနှင့်အတူ (Oberkochen, ဂျာမနီ) ဏု Zeiss Axiovision ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်စနစ်။
စမ်းသပ်မှုအားလုံးမှအချက်အလက်များကို one-, two- သို့မဟုတ်သုံးလမ်းသုံး ANOVA ကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်တွင်ရှမ်း၏နောက်ဆက်တွဲငြင်းပယ်ခြင်းစမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြု၍ နှိုင်းယှဉ်ချက်များစွာအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကို Scheffe သို့မဟုတ် Dunnett ၏ post-hoc test ဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်။ p ≤ 0.05 ၏တန်ဖိုးကိုစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားစေသည်ဟုယူဆခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 1: ဆာပစွမ်းဆောင်မှုနှင့်တိုးတက်သောအချိုးတုံ့ပြန်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပါရာဒိုင်း function သိသိသာသာ neuroadaptations ထုတ်လုပ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအရေးယူတဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံအမူအကျင့်အတိုင်းအရှည်အဖြစ် locomotor ာင်းအကဲဖြတ်။ ကြွက် MDMA (0.35 / ကီလိုဂရမ် mg), ကိုကင်း (5 / ကီလိုဂရမ် mg), (15 / ကီလိုဂရမ် mg) နီကိုတင်း၏နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ဆေးထိုးပေးခဲ့, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြွဆေး (2.5 mg / kg) နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ပထမဦးဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည် ကုသမှုရက်ပေါင်း 1 နှင့် 15 (ဖြည့်စွက်ပုံ။ မှာရရှိနိုင် 1A-E, www.jneurosci.org ) ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေ့ကအပြန်အလှန် (F ကိုကသိသာထင်ရှားသောကုသမှုထင်ရှား(4,42) = 9.335; p ≤ 0.0001) ။ MDMA (p = 0.62) ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, အားလုံးမူးယစ်ဆေးနေ့က 15 (; ကင်း, p ≤ 1; စိတ်ကြွဆေး, p ≤ 0.001 နီကိုတင်း, p ≤ 0.001) နဲ့နှိုင်းယှဉ်နေ့က 0.01 အပေါ်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ် locomotor လှုပ်ရှားမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, သတိထားရ) သွေးဆောင်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲဆားဆေးထိုးခြင်းမရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက် 15 မှာရှိနိုင်ပါ (ဖြည့်စွက်ပုံ။ 2A, ပေါ်လေ့ကာလအတွင်းတိုင်းတာမူးယစ်ဆေးကုသပြောင်းလဲအခြေခံ locomotor လှုပ်ရှားမှု၏အဘယ်သူမျှမ www.jneurosci.org ) ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။
ငါးရက်ကနောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးပြီးနောက်ကျနော်တို့ယခင်ထပ်ခါတလဲလဲနီကိုတင်း, MDMA ၏ဆိုးကျိုးများ, ကင်း, ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူအပေါ်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာအတွက်သီးခြားစီတစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ်များအတွက်တင်ဆက်ထားပါသည် ပုံ 1နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အတူတူပင်ဆားထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကို အသုံးပြု. A-H ကို။ ကျနော်တို့ဒီဆေးတွေအသီးအသီးမှယခင်ထိတွေ့မှုသိသိသာသာများနှင့်ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးနေ့လီဗာအားဖြင့်အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပတုံ့ပြန် (ကုသမှု, F ကိုတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိ(36,378) = 1.683; p ≤ 0.01; post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: နီကိုတင်း, p ≤ 0.01; MDMA, p ≤ 0.05; ကိုကင်း, p ≤ 0.01; စိတ်ကြွဆေး, p ≤ 0.001) ။ ဆာ asymptotic စွမ်းဆောင်ရည်မှာလေ့လာတွေ့ရှိတုံ့ပြန်အတွက်မြဲမြင့်ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant ထိတွေ့ပြီးနောက်ယခင်ကအစီရင်ခံတိုး (ဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်ပါ) နှင့်ကိုက်ညီလှုံ့ဆျောမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှတိုးမြှင့်, အကြံပြုသည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယခင်အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့နေတဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားကို အသုံးပြု. လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ တက်ကြွစွာလီဗာ (လီဗာအပြန်အလှန်အားဖြင့်ကုသမှု, F ကိုအပေါ်တုံ့ပြန်အပေါ်ယခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့တဲ့စာရင်းအင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်(4,42) = 3.340; p ≤ 0.05) (သဖန်းသီး။ 2တစ်ဦးက) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်နောက်ဆုံးချိုးအမှတ် (F ကို(4,42) = 5.560; p ≤ 0.001) (သဖန်းသီး။ 2B က) ။ နှင့်ချိုးအမှတ် (နီကိုတင်း, p ≤ 0.001; MDMA အပိုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားလုံးကုသမှုတက်ကြွတုံ့ပြန်မှု (; MDMA, p ≤ 0.05;; ကင်း, p ≤ 0.001 စိတ်ကြွဆေး, p ≤ 0.001 နီကိုတင်း, p ≤ 0.001) ၏အရေအတွက်ကနှစ်ဦးစလုံးတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ , p ≤ 0.01; ကင်း, p ≤ 0.0001; စိတ်ကြွဆေး, p ≤ 0.0001) လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်ကဤကုသနည်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကိုက်ညီ။ အခြေခံ locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းနှင့်မလှုပ်မရှားလီဗာပုံနှိပျအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းပေးထားသောကြောင့်တိုးပွားလာသောဤအခြေအနေများအောက်တွင်စားစရာဘို့တုံ့ပြန်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအတွင်း nonspecific တိုးထင်ဟပ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
နီကိုတင်း၏ယခင်ထပ်ခါတလဲလဲထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (0.35 / ကီလိုဂရမ် mg), MDMA (2.5 / ကီလိုဂရမ် mg), ကိုကင်း (15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်), ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြွဆေးနောက်ဆက်တွဲဆာပအပြုအမူအပေါ် 2.5 ဃများအတွက်နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ် (15 / ကီလိုဂရမ် mg) ။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များအတူတကွစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပေမယ့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများအတူတူပင်ဆား-ကုသထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကို အသုံးပြု. သီးခြားစီတင်ပြနေကြပါတယ်။ တစ်ဦးက (တက်ကြွစွာတုံ့ပြန်မှု) နှင့် B (မလှုပ်ရှားတုံ့ပြန်မှု) ယခင်နီကိုတင်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုကိုပြသ; C, D, MDMA; အီး, F ကို, ကိုကင်း; , G, H ကို, စိတ်ကြွဆေး။ ± SEM ဆိုလိုတယ်အဖြစ် data ကိုကိုယ်စားပြုနေကြသည်။
ဆာပ၊ နီကိုတင်း (၀.၃၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်)၊ MDMA (၂.၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်)၊ ကိုကင်း (၁၅- မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) သို့မဟုတ်အမ်ဖီတမင်း (၂.၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ဖြင့်ယခင်ကထပ်ခါတလဲလဲကုသမှု (နေ့စဉ် ၂ ကြိမ်၊ ၁၅ d) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအစားဇယားပေါ်မှာ။ ဒေတာကို SEM ±နည်းလမ်းအဖြစ်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ *** p <15; ** p <0.35; * p <2.5 ။ ဆား၊ ဆား၊ နီကောနီ၊ ကိုကိုး၊ အမ်ph, amphetamine; PR စနစ်, တိုးတက်သောအချိုးအစား။
ယခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုလည်းအစားအစာကန့်သတ်မီ, ဆာပလေ့ကျင့်ရေး၏ပထမဦးဆုံးဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးနေ့၌, ဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းတိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်မှု (ဖြည့်စွက်ပုံမတိုင်မီမှတ်တမ်းတင်ထားသောခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ မှာရရှိနိုင် 2B, www.jneurosci.org ) ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။3ဃများအတွက်ကန့်သတ်အစားအစာ access ကိုစပိုင်းတွင်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးအလေးပျမ်းမျှအား 91-92% ပေါ်မှခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချခဲ့ပေ။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏အဆုံးမှာအလေး prerestriction ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ 97-99% မှပြန်လာသောခဲ့နှင့်မျှမကွဲပြားမှုမူးယစ်ဆေး-ထိတွေ့နှင့်ဆား-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်များနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက် ALTER အရှင်ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏လေ့လာတိုးမြှင့်ဖို့သိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေသင့်ပါဘူး။
စမ်းသပ်မှု 2: bitransgenic ကြွက်တွေမှာΔFosB၏သွေးဆောင် overexpression; ဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကို
ကျနော်တို့လာမယ့်ဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း inducibly အဆိုပါ NAc နှင့် dorsal striatum (တို့တွင်တခုတ်တရ selection နှင့်အတူΔFosB overexpress ကြောင်း bitransgenic ကြွက်တွေမှာတိုးလာခဲ့သည်ရှိမရှိဆန်းစစ်Kelz et al ။ , 1999) ။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်ΔFosB-overexpressing ကြွက် (ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ) သူတို့ doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားကြောင့်ΔFosB overexpress မ littermate ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ΔFosB၏ overexpression သိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းအစားအသောက်-အားဖြည့်တုံ့ပြန် (လေ့ကျင့်ရေးနေ့လီဗာအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်, F ကိုတွေ့ရှိရ(9,126) = 3.156; p ≤ 0.01) (သဖန်းသီး။ 3တစ်ဦးက) ။ အဆိုပါမလှုပ်မရှားကို aperture အတွက်လုပ် nosepoke တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက် (ထိုအုပ်စုနှစ်စုအကြားကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ခဲ့သဖန်းသီး။ 3B က) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာ NAc အတွက်ΔFosB overexpression နှင့် dorsal striatum ရွေးချယ်ဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းညွှန်ပြ
ဆာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် bitransgenic ကြွက်တွေမှာΔFosB၏သွေးဆောင် striatal overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ တစ်ဦးက, Active ကိုတုံ့ပြန်မှု။ B က, အလုပ်မလုပ်တုံ့ပြန်မှု။ ± SEM ဆိုလိုတယ်အဖြစ် data ကိုကိုယ်စားပြုနေကြသည်။
ΔFosB-overexpressing တိရိစ္ဆာန်များအတွက်နျဆာပစွမ်းဆောင်ရည်များတိုးမြှင့်စာစားချင်စိတ်ကိုသို့မဟုတ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမြားတှငျပွောငျးလဲခွငျးအားဖွငျ့ကရှင်းပြသည်နိုင်ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အစားအစာကန့်သတ်မီနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ΔFosBအစားအစာကန့်သတ်မတိုင်မီခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မသက်ရောက်ခဲ့မဟုတ်သလိုအဲဒီမှာအမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ ဤတွင်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးအလေး 3-87% ပျမ်းမျှမှ 89dလျှော့ချခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်စားစရာဘို့ access ကိုကန့်သတ်။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏အဆုံးမှာတိရိစ္ဆာန်အလေးနှင့်ညီမျှသည့်ΔFosBတွင်တွေ့မြင်အပြောင်းအလဲများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်တွေမှာရှိနိုင်ပါ (ဖြည့်စွက်ပုံ။ 97A, အတူ prerestriction ခန္ဓာကိုယ်အလေး 99-3% ခဲ့ကြသည် www.jneurosci.org ) ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။ ဒါဟာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်ပေါ်ΔFosB overexpression ၏အလားအလာသက်ရောက်မှုဆာပလေ့လာတွေ့ရှိတုံ့ပြန်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအဘို့အအကောင့်နိုင်ကြောင်းအရှင်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်စမ်းသပ်ပြီးစီးခဲ့သည့်အခါ, ΔFosB overexpression တစ် 30 မိကာလ (ဖြည့်စွက်ပုံစဉ်အတွင်းတိုင်းတာအခြေခံ locomotor လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ အချိန်ရရှိနိုင် 3B, www.jneurosci.org ) ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။ ဤသည်လေ့လာရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်း nonspecific အပြောင်းအလဲတချို့သည်ဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တိုးမြှင်ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အထောက်အကူပြုပါဘူးသောအမြင်ထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော်ΔFosB-overexpressing bitransgenic ကြွက် (စူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းဖို့ပိုကောင်း locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသတင်းပို့ပြီKelz et al ။ , 1999) ။ ကျွန်တော်မျိုးဗီဇစကားရပ် (အစားအစာကန့်သတ်နှင့်အတူ6ရက်သတ္တပတ်) သွေးဆောင် doxycycline ကနေဆုတ်ခွာတစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားကိုအသုံးပြုသောကြောင့်, ကြှနျုပျတို့သညျဤ phenotype အတည်ပြုထွက်ထားကြ၏။ doxycycline (မျိုးဗီဇစကားရပ်အားဖြင့်ကုသမှု, F ကိုအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားသူတို့၏ littermate ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကိုကင်းနှင့်အတူထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာအမှန်စင်စစ်ΔFosB-overexpressing ကြွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျတိုးသရုပ်ပြ(1,44) = 4.241; မှာရရှိနိုင် p ≤ 0.05) (ဖြည့်စွက်ပုံ။ 3C, www.jneurosci.org ) ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။
စမ်းသပ်မှု 3: bitransgenic ကြွက်တွေမှာΔFosB၏သွေးဆောင် overexpression; တိုးတက်သောအချိုးအစား
ယခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ striatal ΔFosB (induces ကြောင်းပေးထားNestler et al ။ , 2001) နှင့်တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးတိုးမြှင့်ဖို့ကိုဒီမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်, ငါတို့လာမယ့်ΔFosB၏ Transgene striatal overexpression ကိုလည်းအားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးပွားစေခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ်စမ်းသပ်မတိုင်မီဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်လုပ်ရန်မအခြေအနေများအောက်တွင်တုံ့ပြန်ဆာပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်ကြွက်များ၏တစ်ဦးကအုပ်စုအသစ် (ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ) (F ကို(1,16) <1) ။ သို့သော်တိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လီဗာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသောမျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်(1,16) = 5.30; p ≤ 0.05) (သဖန်းသီး။ 4မလှုပ်မရှားလီဗာတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်ကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့သော်လည်းတစ်ဦး) နှင့် doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းထား littermate ထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ΔFosB-overexpressing ကြောင့်ကြွက်တွေကိုတွေ့, တက်ကြွတုံ့ပြန်မှု (p ≤ 0.05) ၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ΔFosB-overexpressing ကြွက်လည်းပိုမိုမြင့်မားချိုးအမှတ် (F ကိုရောက်ရှိ(1,16) = 5.73; p ≤ 0.05) (သဖန်းသီး။ 4B က) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအရင် psychostimulant ထိတွေ့မှုကဲ့သို့ΔFosB၏ striatal overexpression လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွါး, ထိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မလှုပ်မရှားတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်ΔFosB-overexpressing ကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲမခံသောကြောင့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း nonspecific တိုးသည်ဤဆိုးကျိုးများမှအထောက်အကူပြုနိုင်ဖွယ်မရှိကြပေ။ ဤအမြင်ကိုထပ်မံ doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားΔFosB overexpressing ကြွက်နှင့် littermate ထိန်းချုပ်မှုကြွက်အကြားခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက်အခြေခံ locomotor လှုပ်ရှားမှု၏အကဲဖြတ်များကထောက်ခံခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုနေ့၌တိုင်းတာအဖြစ်ΔFosB-overexpressing နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအကြားခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မစုစုပေါင်းခြားနားချက်ထင်ရှားရှိကြ၏။ ΔFosB-overexpressing တိရိစ္ဆာန်များကိုပိုမိုအစားအစာ-လှုံ့ဆော်ဆာပတုံ့ပြန်မှုထုတ်လွှတ်လိမ့်မယ်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်သူတို့ကလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်သည့်အခါကပိုအစားအစာကိုစားသုံးဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ ဒီလေ့လာရေးများအတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိရှင်းပြချက်လှုံ့ဆျောမှုမြောက်မြားစွာနောက်ထပ်အကြောင်းအချက်များ (အစာစားချင်စိတ်, မွတ်မပြေနိုင်သော, ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြည်နယ်, etc) သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူနှင့်အစားအစာများ၏အမှန်တကယ်စားသုံးမှု, တိရစ္ဆာန်တစ်ဦးစစ်ကူဆည်းပူးဖို့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုခက်ခဲဆုံးဖြတ်သည်ပေမယ့်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ကြွက်သား - သွေးဆောင်အားဖြည့်တန်ဖိုးမတိုင်မီနှင့်အပြီး, အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်ဆာပအပေါ် bitransgenic ကြွက်များတွင် FosB ၏သွေးဆောင် overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ A, B, Baseline: လီဗာတုံ့ပြန်မှု (က)၊ break point (B) ။ C, D, အားဖြည့်တန်ဖိုးပြီးနောက်: လီဗာတုံ့ပြန်မှု (C), ချိုးအမှတ် ()) ။ ဒေတာကို SEM ±နည်းလမ်းအဖြစ်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ * p <0.05 ။
ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ΔFosB bitransgenic ကြွက်တွေဟာ striatum တစ်လျှောက်လုံးΔFosBဖော်ပြ။ (ထို NAc အပါအဝင်) ကို ventral striatum စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးသွားရမည်အကြောင်း, အ dorsal striatum (ဆာအလေ့အထများ၏ဝယ်ယူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့စောဒကတက်တာဖြစ်ပါတယ်ယဉ် et al ။ , 2004; Faure et al ။ , 2005) ။ ကျွန်တော်ဆာပအလေ့အထများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအတော်လေးယဉ်ပါးအကျယ်ချဲ့အားဖြည့်ကန့်သတ်, အခြေအနေများနှင့်အတူအနိမ့်အချိုးအချိန်ဇယားကိုသုံးပြီးလေ့ကျင့်ရေးအဆင့်စဉ်အတွင်းဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုစောငျ့ရှောကျမပြုခဲ့ပေမယ့် (Dickinson, 1985), ကအလေ့အထများတည်ထောင်ခြင်းယင်းတိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်တုံ့ပြန်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေတုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ် prefeeding ခြင်းဖြင့်စစ်ကူတန်ဖိုးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထိုသို့သော prefeeding တုံ့ပြန်မကွဲပြားမှုနှင့်အတူတုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ်ΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖျက်ဆီးသို့မဟုတ်ΔFosB-overexpressing နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်အကြားလေ့လာတွေ့ရှိအချက်များကိုချိုးဖျက် (F ကို(1,16) <1) (သဖန်းသီး။ 4ကို C, D ကို) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာΔFosB၏ striatal overexpression ဒီစမ်းသပ်ခြင်းအချိန်ဇယားကိုသုံးပြီးဆုခခြံရလဒ်များ၏တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုများဖို့ sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်မပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ယင်းအစားအဆိုပါတိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်လေ့လာတုံ့ပြန်သည့်ဆာပဂိုးညွှန်ကြားဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်ΔFosB-overexpressing ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့ချိုးအချက်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်တိုးပွားလှုံ့ဆျောမှုမှမဟုတျဘဲမွငျ့မားသောအလေ့အထကဲ့သို့တုံ့ပြန်ရန် attribute ဖြစ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်မှု 4: အ NAc core ကိုအတွက်ΔFosB၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression: ဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကို
အကဲဖြတ်ရန်ဖို့ NAc အတွက်ရွေးချယ်ΔFosB overexpression အဆိုပါ bitransgenic ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူများအတွက်အကောင့်နိုငျမလားဆိုတာကျနော်တို့ရွေးချယ်ကြွက်များ၏ NAc core ကိုသို့တစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် HSV-ΔFosB, ဒါမှမဟုတ် HSV-LacZ ထုံမွှန်းနှင့်အစားအစာပေါ်မှာဤခြယ်လှယ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာ (ဆာစွမ်းဆောင်ရည် -reinforcedသဖန်းသီး။ 5A, B) ။ မဂ္ဂဇင်းလေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက် HSV-ΔFosBသို့မဟုတ် HSV-LacZ အပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်း၏စတင်ရှေ့တော်၌ထို NAc core ကို 40 ဇသို့ထုံမွှန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါပြုတ်ရည်၏တည်နေရာနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇစကားရပ်၏အတိုင်းအတာမှာပြသနေကြသည် ပုံ 6, HSV-ΔFosB၏ A နှင့် B တွင် NAc တာဟာလုပ်တက်ကြွတုံ့ပြန်မှု၏နံပါတ်တစ်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုး (လီဗာအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်, F ကိုထုတ်လုပ်(1,12) = 8.534; p ≤ 0.05) (သဖန်းသီး။ 5တစ်ဦးက), စမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးတည်မြဲမှုအရာ။ ΔFosB overexpression မရှိသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများမလှုပ်ရှားတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်အပေါ် NAc core ကိုအတွင်းရှိခဲ့သည်ကြောင့်ဤဆိုးကျိုးများ (ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 5B က) သို့မဟုတ်အခြေခံ locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် (Data မှမပြ) ကိုစမ်းသပ်မှုများပြီးစီးပြီးနောက်နေ့ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏ Overexpression အရှင်ယခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်ΔFosB၏ striatal overexpression များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ mimicked ။
တုံ့ပြန်ဆာပေါ်လေ့ကျင့်ခြင်းမပြုမီ NAc core ကိုသို့ HSV-ΔFosB၏တာဟာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ တစ်ဦးက, Active ကိုတုံ့ပြန်မှု။ B က, အလုပ်မလုပ်တုံ့ပြန်မှု။ ± SEM ဆိုလိုတယ်အဖြစ် data ကိုကိုယ်စားပြုနေကြသည်။
တစ်ဦးကအဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုစမ်းသပ်ချက်အဘို့အပြုတ်ရည်ဆိုဒ်များနေရာချထားခြင်း။ ထိပ်တန်းက The ဖြည့်အနက်ရောင်စက်ဝိုင်းရည်ရွယ်ပြုတ်ရည် site ကိုမှကိုက်ညီတဲ့။ ~ အတွင်းလုပ်သာလျှင်တာဟာဒီဧရိယာ၏ 0.5 မီလီမီတာ (ဆိုလိုသည်မှာယင်း NAc core ကိုအတွင်း), စက်ဝိုင်းများကညွှန်ပြအဖြစ်, လက်ခံနိုင်ဖွယ်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ဒီဧရိယာပြင်ပကိုဖန်ဆင်းတာဟာနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ အောက်ခြေတစ်ကိုယ်စားလှယ်တိရိစ္ဆာန်အတွက် NAc အတွင်းပြုတ်ရည် site ကို။ B က, HSV-LacZ ၏ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်ပရိုတိန်းထုတ်ဖော် Immunohistochemical စိစစ်အတည်ပြု။ ထိပ်ပြားဟာ NAc core ကို (ချဲ့× 2.5 နှင့် 10) အတွင်းβ-galactosidase စကားရပ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အောက်ခြေပြားမူလတန်း antibody ကို၏ပါဝင်မှုမရှိဘဲတူညီသော immunohistochemical လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးကပ်လျက်ထိန်းချုပ်မှုကဏ္ဍများအတွက်နဲ့ Immunofluorescence ၏မရှိခြင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 5: အ NAc core ကိုအတွက်ΔFosB၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression: တိုးတက်သောအချိုးအစား
အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု. နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုဟာ NAc core ကိုအတွက်ΔFosB၏တိုက်ရိုက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကန့်သတ်ခြင်းရှိမရှိ overexpression ကြွက်များတွင်လှုံ့ဆျောမှုမြှင့်တင်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာ HSV-ΔFosBနောက်ဆက်တွဲတိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်မှုအပေါ်သင်တန်းပေးစဉ်အတွင်းΔFosB overexpression မဆိုအလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖျက်သိမ်းရေး, ဆာပလေ့ကျင့်ရေးပြီးစီးခဲ့ပြီးမှသာထုံမွှန်းခဲ့သည်။ ကြွက်များ၏တစ်ဦးကအုပ်စုအသစ်အဖြစ်မတိုင်မီလေ့ကျင့်သင်ကြားနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏နောက်ဆုံးရက်ဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီးမျှမျှတတစမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် NAc core ကိုသို့ HSV-ΔFosBသို့မဟုတ် HSV-LacZ ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တာဟာလက်ခံရရှိပြီး overexpression ၏5ဃပြီးနောက်တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလီဗာအပြန်အလှန် (F ကိုကသိသာဗီဇစကားရပ်ထင်ရှား(1,12) = 14.91; p ≤ 0.01) (သဖန်းသီး။ 7တစ်ဦးက) ။ HSV-ΔFosBနှင့်အတူထုံမွှန်းကြွက်ကတော့မလှုပ်မရှားလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်ထိခိုက်နစ်နာမဟုတ်ခဲ့သော်လည်း HSV-LacZ နှင့်အတူထုံမွှန်းသူများ, နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုတက်ကြွတုံ့ပြန်မှု (p ≤ 0.01) ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒီတိုးနှင့်အတူတသမတ်တည်း, HSV-ΔFosBနှင့်အတူထုံမွှန်းကြွက်လည်းပိုမိုမြင့်မားချိုးအမှတ် (F ကိုရှိခဲ့တယ်(1,12) = 18.849; p ≤ 0.001) (သဖန်းသီး။ 7HSV-LacZ နှင့်အတူထုံမွှန်းတိရိစ္ဆာန်များထက် B က) ။ အခြေခံ locomotor လှုပ်ရှားမှုဟာတိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်မှုမှာရှိနိုင်ပါ (ဖြည့်စွက်ပုံ။ 1A ရှေ့တော်၌,4ဇစမ်းသပ်ပြီးအပေါ်ΔFosBမရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် www.jneurosci.org ) ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။ မှာရရှိနိုင်တိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်ခြင်း၏နေ့၌ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မကွဲပြားမှု (ဖြည့်စွက်ပုံ။ 4B လည်းရှိခဲ့သည် www.jneurosci.org ) ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် Transgene ΔFosB-overexpressing ကြွက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုထောကျပံ့များနှင့် NAc အတွက်ΔFosB၏ရွေးချယ် overexpression အစားအစာ-ဆက်စပ်လှုံ့ဆျောမှုမြှင့်တင်ရန်လုံလောက်သောကြောင်းဖော်ပြသည်။
အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအစားအစီအစဉ်အပေါ်တုံ့ပြန်ဆာပအပေါ်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ HSV -FosB5of ၏ပြုတ်ရည်၏ Eff အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဖြေ။ ။ လီဗာတုံ့ပြန်မှု။ B, အမှတ်မှတ်။ ဒေတာကို SEM ±နည်းလမ်းအဖြစ်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ *** p <0.001; ** p <0.01 ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု NAc အတွင်းΔFosB၏ overexpression အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပ behavio ပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းပြသr ကို။ ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, MDMA, ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်းတိုးမြှင့်ဖို့အရင်ထိတွေ့မှုနောက်ဆက်တွဲဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့တိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကိုလည်းအားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်အစားအစာ-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတိုးလာ. ယခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ဤဆိုးကျိုးများ (NSE-tTA × TetOP-ΔFosB) ကြွက်သို့မဟုတ် NAc အတွက်ရွေးချယ်ΔFosBဖော်ပြမယ့်ဝတ္ထုဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုသုံးပြီးသွေးဆောင် bitransgenic သုံးပြီး, အ striatum အတွက်ΔFosB၏ကန့်သတ် overexpression အားဖြင့် mimicked ခဲ့ကြသည်။ အထူးသ, အ NAc core ကိုအတွက်ΔFosB၏ overexpression, တုံ့ပြန်ဆာပြီးနောက်ထားပြီးတိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်, အစားအစာများအတွက်မြှင့်တင်ရန်လှုံ့ဆျောမှုဝယ်ယူခဲ့သညျ။ အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အစားအစာ-အားဖြည့်အပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်စိတ်ခွန်အားနိုးလွှမ်းမိုးမှုမှဆီလျော်မှုနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်များထည့်သွင်းရန်ဒီကူးယူအချက်အဘို့အခန်းကဏ္ဍကိုတိုးချဲ့, ဆာပအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်နိုငျသောမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် neuroadaptations တစ်အလားအလာဖျန်ဖြေအဖြစ် NAc core ကိုအတွက်ΔFosBခွဲခြားသတ်မှတ်။ သူတို့ကအစ NAc အတွက်ΔFosBစကားရပ်သွေးဆောင်ကြောင်းအခြေအနေများနှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ကူ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်.
ΔFosBနာတာရှည်ပြီးနောက် NAc နှင့် dorsal striatum နှစ်ဦးစလုံး၏ dynorphin-ဖော်ပြအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွင်းစုဆောင်းပေမယ့်စူးရှ, မအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထိတွေ့။ စကားရပ်၏ဤဒေသဆိုင်ရာပုံစံကဒီမှာအသုံးပြုသောသွေးဆောင် bitransgenic ΔFosB-overexpressing ကြွက်တွေအတွက်ပြန်ထုတ်ပေးသည်။ ဤအကြွက်များတွင် osFosB ၏မြင့်မားသောကိုယ်ဝန်ဆောင်အဆင့်များသည် condition တိရိစ္ဆာန်များကိုကင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ကို ပို၍ အခြေအနေကောင်းစေခြင်းဖြင့်အခြေအနေကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။ (Kelz et al ။ , 1999; Zachary et al ။ , 2006) ။ ဒါဟာအစ (Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့လှုံ့ဆျောမှု striatal ΔFosB overexpression နေဖြင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းအကြံပြုကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးကိုကြီးထွားများပြားစေColby et al ။ , 2003) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကဤကြွက်များတွင် striatal ΔFosB overexpression လည်းအစားအစာစစ်ကူများအတွက်တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးတိုးလာနှင့်ဤသက်ရောက်မှုကြွက်များတွင် NAc core ကိုအတွက်ΔFosB၏ကန့်သတ်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression နေဖြင့်ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာΔFosBသူတို့ΔFosB၏ striatal စကားရပ်နာတာရှည်ဘီးပြေးသို့မဟုတ် sucrose အရက်သောက်ပြီးနောက်တိုးမြှင့်ကြောင်းအစားအစာ, ဆေးဝါး, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းလေ့ကျင့်ခန်း, ပဏာမလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီစိတ်ကူးတစ်ခု (be, မူလတန်းစစ်ကူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုမှတ်တမ်း modulator တွေကိုအဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါအကြံပြုMcClung et al ။ , 2004). ဤရွေ့ကားဒေတာΔFosB၏ NAc overexpression နှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ကူ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ NAc ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း differential ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် pavlovian သို့မဟုတ်နျဆာပမက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်စောဒကတက်ခဲ့ကြ (Corbit et al ။ , 2001; က de Borchgrave et al ။ , 2002), ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ပိုပြီးယေဘုယျစိတ်ခွန်အားနိုးလွှမ်းမိုးမှုထိုကဲ့သို့သော amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယကဲ့သို့အခြားဒေသများအားဖြင့် encoded စေခြင်းငှါသော်လည်း (Corbit နှင့် Balleine, 2005) ။ အဆိုပါ NAc core ကို, သို့သော်လည်း (ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဆာပသင်ယူမှု၏ဝယ်ယူများအတွက်အရေးပါ site ကိုဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီSmith က-သမင်ဒရယ်နှင့်ကယ်လီ, 2000; Baldwin et al ။ , 2002a,b; ကယ်လီ, 2004) ။ ကျနော်တို့ဆာပအပြုအမူတိုးမြှင့်အပေါ်ယခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်ရ Transgene striatal ΔFosB overexpression ၏ညီမျှသောသက်ရောက်မှုကိုပြ။ HSV-ΔFosB၏ပြုတ်ရည်ဟာ NAc core ကိုလည်းတိုးလာအစားအစာ-အားဖြည့်တုံ့ပြန်ဆာပရန်ကန့်သတ်။ ဤအစမ်းသပ်ချက်ကဤအပြုအမူအတွက် dorsal striatum တစ်အလှူငွေဖယ်ထုတ်ကြဘူးသော်လည်း, သူတို့သည်ပြင်းထန်စွာ NAc အတွင်းဗီဇစကားရပ်ထဲမှာΔFosB-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲအစားအစာ-လှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တည်ငြိမ်ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်ယခင်ကအောင်မြင်ခဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ΔFosBထုတ်ဖော်ပြောဆိုအခါတုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားကိုလည်းတိုးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်သောကြောင့်, ဆာပအပြုအမူအပေါ်စိတ်ခွန်အားနိုးလွှမ်းမိုးမှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖွယ်ရှိပုံရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်းနျဆာပသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုထိခိုက်သောဖြစ်နိုင်ခြေသို့သော်လုံးဝဖယ်ထုတ်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောက်ချက်များ၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်တွင်ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုးလာသည်ယခင်ပါးစပ်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိ (မိုင် et al ။ , 2004) (ကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးတိုးမြှင့်ဖို့နာတာရှည်နီကိုတင်းကုသမှုများ၏စွမ်းရည်နှင့်ကိုက်ညီစိတ်ခွန်အားနိုးပွောငျးလဲပါဝင်မှစောဒကတက်ထားသည်Brunzell et al ။ , 2006). ထို့အပွငျ dopamine ပို့ဆောင်ရေး, extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ထားတဲ့အတွက်ကြွက်ထွက်-ခေါက်တိုးမြှင်ΔFosB immunoreactivity နှင့်အစားအစာ-အားဖြည့်စိတ်အားထက်သန်နှစ်ဦးစလုံးအားပြသရန်, ဒါပေမယ့် (သင်ယူခြင်းပြောင်းလဲမရCagniard et al ။ , 2006). ထို့အပြင်ကျနော်တို့အစားအစာ prefeeding အားဖြင့် "devalued" သောအခါကြွက်များတွင် striatal ΔFosB၏ overexpression စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေမတွေ့ရှိရ။ ဤရွေ့ကားဒေတာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စစ်ကူများစိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးအထိခိုက်မခံခဲ့ကြခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားခဲ့သည်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ.
ယခင်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုလည်း (pavlovian ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့်တိုင်းတာ, သဘာဝစစ်ကူနဲ့ဆက်စပ် conditional လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်Harmer နှင့် Phillips က, 1998; တေလာနှင့် Jentsch, 2001; Olausson et al ။ , 2003), အေးစက်အားဖြည့် (တေလာနှင့် Horger, 1999; Olausson et al ။ , 2004), နှင့် pavlovian-to-ဆာလွှဲပြောင်း (Wyvell နှင့် Berridge, 2001) ။ အဲဒီမှာ shell ကိုဆန့်ကျင်အဖြစ် NAc core ကိုခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထား, ယခု pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှု (နေဖြင့်မူးယစ်ဆေး-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်ပါကင် et al ။ , 1999, 2002; ခန်းမ et al ။ , 2001; Dalley et al ။ , 2002; Ito က et al ။ , 2004) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များ NAc အတွက်ΔFosB၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သော induction အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ကဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်တိုးမြှင့်သောအားဖြင့်တဦးတည်းယန္တရားဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာ pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှု, အေးစက်စစ်ကူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, ပစ္စုပ္ပန်အပြုအမူသက်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ striatal ΔFosBအတွက်တိုးကကမကထပြုခဲ့ထိုကဲ့သို့သော conditional လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အပြုအမူကျော်တိုးမြှင်ထိန်းချုပ်မှုကိုလည်းမူးယစ်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပေါ်ပရိုတိန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ (Kelz et al ။ , 1999; Zachary et al ။ , 2006) နှင့်ကိုကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုး (Colby et al ။ , 2003) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထောက်အကူပြုဖို့တွေးဆခဲ့ကြ (Robinson နဲ့ Berridge, 1993; Jentsch နှင့်တေလာ, 1999; Robbins နှင့် Everitt, 1999; Nestler, 2004) ။ ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာကိုလည်းစွဲလမ်းအပြုအမူ (ထဲမှာမျိုးစုံဆာနှင့် pavlovian ဖြစ်စဉ်များကိုအလေးပေးသောအခြားသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီများမှာEveritt နှင့် Robbins, 2005) ။ အပိုဆောင်းအလုပ်ယခု drug- ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် NAc နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အသင်းသို့မဟုတ်နျဆာပစွမ်းဆောင်ရည်လွယ်ကူချောမွေ့နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်တွေလေးစားမှုနှင့်အတူအခြားအ limbic-striatal ငျဒသေအတွက်ΔFosB-သွေးဆောင် neuroadaptations သတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
မူလတန်းသို့မဟုတ် conditional စစ်ကူအားဖြင့်လှုံ့ဆော်သည့် NAc သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြုအမူအတွင်းပြောင်းလဲပေးသောအားဖြင့်တိကျသောမော်လီကျူးယန္တရားများ (လူသိများကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်ကယ်လီနှင့် Berridge, 2002), အ NAc ၏ GABAergic အလတ်စား spiny အာရုံခံ drug- နှင့်အတွေ့အကြုံ-မှီခို plasticity များအတွက်အရေးပါအလွှာထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ ဒီနေရာမှာ corticolimbic afferents ထံမှ ventral tegmental ဧရိယာနှင့် glutamatergic input ကိုကနေ dopaminergic input ကိုဘုံ dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုးပေါ်သို့ဆုံ (Sesack နှင့် Pickel, 1990; Smith ကနှင့် Bolam, 1990) ။ နာတာရှည် psychostimulant ထိတွေ့မှု ထိုကဲ့သို့သောကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆဟာ NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက်အာရုံခံအပေါ်တိုးပွါး (Robinson နဲ့ Kolb, 1999; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2001; လီ et al ။ , 2003, 2004) ။ မကြာသေးမီကအပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်း induction အဆိုပါ NAc core ကိုအတွင်း dendritic ကျောရိုးတစ်ခုတိုး (နဲ့အတူအထူးသဆက်စပ်ခဲ့သည်လီ et al ။ , 2004) ။ အထူးသ, ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တိုးသာ: D ထဲမှာဆက်လက်ရှိ1ΔFosB coexpress ကြောင်း -positive အာရုံခံ (Robinson နဲ့ Kolb, 1999; Lee က et al ။ , 2006). အဆိုပါ NAc core ကိုအတွက်ΔFosBအရှင်ဆာပအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းတည်တံ့ Synaptic plasticity အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ. dopamine-အချိုမှု neurotransmission များအတွက်အမှန်စင်စစ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ (Smith က-သမင်ဒရယ်နှင့်ကယ်လီ, 2000), ပရိုတိန်း (ကလှုပ်ရှားမှု kinaseBaldwin et al ။ , 2002a), နှင့်က de Novo ပရိုတိန်းပေါင်းစပ် (ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2002) ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် NAc core ကိုအတွင်းယခင်ကအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အစားအစာ-အားဖြည့်သည့် NAc core ကိုအတွက် overexpressed သည့်အခါတုံ့ပြန်တိုးမြှင့်နိုင်မယ့်ကူးယူအချက်အဖြစ်ΔFosBခွဲခြားသတ်မှတ်။ ဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်တိကျသောမျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်ပရိုတိန်းတိကျစွာသတ်မှတ်ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ΔFosB neuroplasticity မှာပါဝင်နေတဲ့ NAc အတွက်မျိုးစုံပရိုတိန်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိန်းညှိ (McClung နှင့် Nestler, 2003) ။ မကြာသေးမီက microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကဒီမှာသုံးခြင်းနှင့်ΔFosB (၏အတော်လေးရေတိုရေရှည်စကားရပ်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်မျိုးဗီဇ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ဖော်ထုတ်ΔFosBဖော်ပြသည့် bitransgenic ကြွက်များ၏ NAc အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပုံစံများသွင်ပြင်လက္ခဏာMcClung နှင့် Nestler, 2003) ။ BDNF (တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဗီဇခဲ့, ဤအာရုံကြောဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် BDNF drug- နှင့်အစားအစာ-ဆက်စပ်တွေကိုများအတွက်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်လူသိများသည်Horger et al ။ , 1999; Grimm et al ။ , 2003; lu et al ။ , 2004) ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးအပိုဆောင်းဗီဇဖြစ်ပါသည် cyclin-မှီခို kinase5(Bibb et al ။ , 2001), အစΔFosBအားဖြင့်သွေးဆောင်သော, နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity (နှစ်ဦးစလုံးထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်Norrholm et al ။ , 2003) နှင့်လှုံ့ဆျောမှုကသဘာဝသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစစ်ကူများအတွက် (JR တေလာ, အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်) တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးဖြင့်တိုင်းတာ။ သို့တိုင်နောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း AMPA အချိုမှု receptors ၏ GluR2 subunit များမှာ (Kelz et al ။ , 1999) နှင့်ကူးယူအချက်NFκB (နျူကလီးယားအချက်κB) (အန်း et al ။ , 2001) ။ ဒါဟာနျဆာပစွမ်းဆောင်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်ΔFosBများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေဘို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ်ဤအခြင်းနှင့် NAc ငျဒသေရှိအခြားစညျးမဉျြးစညျးကမျးပရိုတိန်းအကဲဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ စမ်းသပ်ချက်များပစ္စုပ္ပန်စီးရီးယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအတွက်ပြသထားသည်အတိုင်း NAc အတွင်းΔFosB၏ overexpression, အစားအစာ-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်နှင့်အားဖြင့်ဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းညှိနိုင်သောသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာΔFosBရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအပေါ်စစ်ကူ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်မှာရှိတဲ့တိုးမြှင့်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်အထွေထွေမော်လီကျူး switch အဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါအသစ်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များက NAc ΔFosB၏ induction ဥပမာ, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး, စိတ်ဖိစီးမှု, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းအလွန်အမင်းကြိုးအစားအစာများ, အလုပ်မဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များ compulsive အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ရောဂါမမှန်မှုအရာအားဖြင့်တစ်ဦးဝေဖန်ယန္တရားဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်.
o မတ်လ 15, 2006 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
o တည်းဖြတ်မူဇွန်လ 23, 2006 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
o လက်ခံသြဂုတ်လ 2, 2006 ။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အမျိုးသားအင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်လျက် Dilja Krueger, Drew Kiraly ဒေါက်တာ Ralph DiLeone ရောဘတ် Sears နှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု, ယေးလ်တက္ကသိုလ်မှဦးစီးဌာန၌ဒေါက်တာဂျော်နသန် Hommel ၏တန်ဖိုးရှိသောအကူအညီအသိအမှတျပွု။ ငါတို့သည်လည်းဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်အထောက်အကူဖြစ်စေမှတ်ချက်ပေးဘို့ဒေါက်တာဂျနီဖာ Quinn ဒေါက်တာရှင်ပေါလု Hitchcott ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
စာပေးစာယူဂျိန်း R. တေလာ, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, Molecular Psychiatry, ဆေးပညာ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, Ribicoff သုတေသန်ဆောင်မှုများ, Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ, 34 ပန်းခြံလမ်း, New Heaven, CT 06508 ၏ဌာနခွဲမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အာရုံကြောသိပ္ပံ 2006-0270 / 6474 / 06-269196 $ 09 / 15.00 များအတွက်မူပိုင်ခွင့်©0Society က
2. Chen က JS,
3. Zagouras P ကို,
4. မဂ္ဂနာ H ကို,
5. ဟော်လန် J ကို,
6. Schaeffer အီး,
နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်NFκB၏ (2001) induction ။ J ကို Neurochem 79: 221-224 ။
2. Sadeghian K သည်,
4. ကယ်လီ AE
(2002a) အစာစားချင်စိတ်ဆာပသင်ယူမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွင်းစခန်း-မှီခိုပရိုတိန်း kinase ၏တားစီးနေဖြင့်အာရုံချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ 77-44: Neurobiol Mem ကို 62 လေ့လာပါ။
3. ကယ်လီ AE
(2002b) အစာစားချင်စိတ်ဆာပသင်ယူမှု NMDA နှင့် dopamine: D ၏တော့သည် activation လိုအပ်ပါတယ်1 အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွင်း receptors ။ J ကို neuroscience 22: 1063-1071 ။
1. Balleine B က,
2. Killcross S က
ဆာအရေးယူမှုအပေါ်နျူကလိယ accumbens ၏ ibotenic အက်ဆစ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ (1994) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 65: 181-193 ။
2. Hyman အရှေ့တောင်
(2000) စွဲလမ်းမှု, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ 25: 515-532 ။
2. ရော်ဘင်ဆင် TE
1. Bibb ဂျာ
2. Chen က J ကို,
3. တေလာ JR,
4. Svenningsson P ကို,
5. Nishi တစ်ဦးက,
7. yan Z ကို,
9. Ouimet CC ကို,
10 ။ Nairn AC အ,
11 ။ Nestler EJ,
12 ။ Greengard P ကို
ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏ (2001) အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝတရား 410: 376-380 ။
3. Schneider B က,
4. Olausson P ကို,
5. တေလာ JR,
(2006) beta2-Subunit ပါဝင်သောနီကိုတင်း acetylcholine receptors conditional အားဖြည့်အတွက်နီကိုတင်း-သွေးဆောင်တိုးပေမယ့် C57BL /6ကြွက်တွေအတွက်စားစရာဘို့တုံ့ပြန်တိုးတက်သောမဟုတ်အချိုးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 184: 328-338 ။
1. Cagniard B က,
2. ပိုးစာ PD,
3. Brunner: D,
4. Zhuang မှာ X
နာတာရှည်မွငျ့မား dopamine ပြပွဲတိုးမြှင်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူ (2006) ကြွက်တွေကကားအစားအစာဆုလာဘ်အဘို့, သင်ယူခြင်းမဟုတ်။ Neuropsychopharmacology 31: 1362-1370 ။
1. Carlezon WA ဂျူနီယာ,
2. Thome J ကို,
4. ယာဉ်ကြော-Ladd SB,
6. Hiroi N ကို,
CREB အားဖြင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်များ (1998) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ သိပ္ပံ 282: 2272-2275 ။
1. Chen က J ကို,
2. Kelz ကို MB,
3. BT မျှော်လင့်ပါတယ်,
4. Nakabeppu Y ကို,
(1997) နာတာရှည် Fos-related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်ΔFosB၏တည်ငြိမ်မျိုးကွဲ။ J ကို neuroscience 17: 4933-4941 ။
3. Zeng, G,
4. Sakai က N ကို,
5. Steffen ကို C,
ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ။ Mol Pharmacol 54: 495-503 ။
2. Whisler K သည်,
3. Steffen ကို C,
5. ကိုယ်ပိုင် DW
(2005) pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်း၏အထွေထွေနှင့်ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့ပုံစံများအပေါ် basolateral နှင့်ဗဟို amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏နှစ်ချက် dissociation ။ J ကို neuroscience 25: 962-970 ။
(2001) ကနျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍဆာအေးစက်အတွက် accumbens: accumbens core နဲ့ shell ကိုအကြားတစ်ဦး functional dissociation အထောက်အထား။ J ကို neuroscience 21: 3251-3260 ။
2. Chudasama Y ကို,
5. ဖလက်ချာ CM,
(2002) နျူကလိယ dopamine accumbens နှင့်ချဉ်းကပ်သင်ယူမှုလူမျိုးအတန်းအစားခွဲခြားမှု: 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်စနစ်တကျ apomorphine အုပ်ချုပ်ရေးအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 161: 425-433 ။
1. က de Borchgrave R ကို,
2. Rawlins ဖြစ်မှု,
3. Dickinson တစ်ဦးက,
cytotoxic နျူကလိယ၏ (2002) အကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်များတွင်ဆာအေးစက်အပေါ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် accumbens ။ Exp ဦးနှောက် Res 144: 50-68 ။
1. di Ciano P ကို,
(2004a) ကို basolateral amygdala နှင့်နျူကလိယအကြားတိုက်ရိုက် interaction က core ကိုကြွက်များအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအခြေခံ accumbens ။ J ကို neuroscience 24: 7167-7173 ။
(2004b) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်း, ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ် sucrose နှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်အေးစက်: စွဲလမ်းအပြုအမူများ၏ဇွဲများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropharmacology 47 ([ပျော့ပျောင်း 1]) 202-213 ။
1. Dickinson တစ်ဦးက
(1985) လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အလေ့အထများ: အပြုအမူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 308: 67-78 ။
1. Faure တစ်ဦးက,
2. Haberland ဦး,
3. အခြေအနေက F,
4. အယ်လ် Massioui N ကို
အဆိုပါ nigrostriatal dopamine စနစ် (2005) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေး disrupts ။ J ကို neuroscience 25: 2771-2780 ။
2. lu, L,
3. Hayashi T က,
4. BT မျှော်လင့်ပါတယ်,
6. Shaham Y ကို
ကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက် mesolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်းဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အတွက် (2003) အချိန်-မှီခိုတိုး: ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွားဘို့ဂယက်ရိုက်။ J ကို neuroscience 23: 742-747 ။
1. ခန်းမ J ကို,
3. ကော် TM,
4. Dickinson တစ်ဦးက,
(2001) က amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်နျူကလိယနျဆာပအပြုအမူအပေါ် Pavlovian လွှမ်းမိုးမှုဖြန်ဖြေအတွက်အဓိက accumbens ။ EUR J ကို neuroscience 13: 1984-1992 ။
2. Phillips က GD
(1998) D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအထပ်ထပ် pretreatment အောက်ပါအစာစားချင်စိတ်အေးစက် Enhanced ။ ပြုမူနေ Pharmacol 9: 299-308 ။
1. ဟာနန်ဒက်ဇ် PJ,
(2002) ဆာပသင်ယူမှု၏အစောပိုင်းစုစည်းပြီးယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်လိုအပ်သည်။ နတ် neuroscience 5: 1327-1331 ။
3. Georgescu: D,
ဗိုင်းရပ်စ်-mediated RNA ်ရောက်စွက်ဖက်ကိုအသုံးပြုပြီးဦးနှောက်ထဲမှာ (2003) ဒေသခံဗီဇ knockdown ။ နတ် Med 9: 1539-1544 ။
2. Shelton K သည်,
3. Schenk S က
(1990) Preexposure ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှကြွက်များ sensitizes ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 37: 707-711 ။
စိတ်ကြွဆေးနှင့်နီကိုတင်းဖို့ (1992) Preexposure Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းတဲ့အနိမ့်ထိုးဖို့ကြွက် predisposes ။ Psychopharmacology (Berl) 107: 271-276 ။
2. Iyasere, CA,
6. တေလာ JR
ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်အားဖြင့် (1999) locomotor လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည်မြှင့်ခြင်းနှင့်ကင်းဖို့ conditional ဆုလာဘ်။ J ကို neuroscience 19: 4110-4122 ။
1. Ito က R ကို,
နျူကလိယအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူကျော် (2004) Differential ထိန်းချုပ်မှု core နဲ့ shell ကို accumbens ။ နတ် neuroscience 7: 389-397 ။
2. တေလာ JR
1. ကယ်လီ AE
အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများ (2004) Ventral striatal ထိန်းချုပ်မှု: စားသုံးမိအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ 27: 765-776 ။
1. ကယ်လီ AE,
1. Kelz ကို MB,
3. Carlezon WA ဂျူနီယာ,
4. Whisler K သည်,
5. Gilden L ကို,
6. Beckmann လေး,
7. Steffen ကို C,
8. Zhang က YJ,
9. Marotti L ကို,
1. Konradi ကို C,
2. ကိုးလ် RL,
3. Heckers S က,
4. Hyman အရှေ့တောင်
(1994) ဖက်တမင်းဆေးပြားကူးယူအချက် CREB မှတဆင့်ကြွက် striatum အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 14: 5623-5634 ။
1. Lee က KW,
2. ကင်မ် Y ကို,
3. Kim ကတစ်ဦး,
4. Helmin K သည်,
5. Nairn AC အ,
6. Greengard P ကို
နျူကလိယ accumbens အတွက် D2006 နှင့် D1 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် (2) ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 103: 3399-3404 ။
1. လီ Y ကို,
2. Kolb B က,
3. ရော်ဘင်ဆင် TE
(2003) ကနျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆအတွက်မြဲစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများတည်နေရာနဲ့-putamen caudate ။ Neuropsychopharmacology 28: 1082-1085 ။
(2004) အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction နျူကလီးယပ် accumbens ၏ (သို့သော် shell မဟုတ်) အဓိကထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ EUR J ကို neuroscience 20: 1647-1654 ။
1. lu, L,
3. လျူ SY,
5. Shaham Y ကို
(2004) ကို ventral tegmental ဧရိယာသို့ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်တစ်တစ်ခုတည်းပြုတ်ရည်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ရှာကြံကိုကင်းများကြာရှည်ခံအလားအလာဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience 24: 1604-1611 ။
1. McClung, CA,
CREB နှင့်ΔFosBအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်၏ (2003) စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အကင်းဆုလာဘ်။ နတ် neuroscience 6: 1208-1215 ။
4. Zachary V ကို,
5. Berton အို
(2004) ΔFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res 132: 146-154 ။
1. မိုင် FJ,
4. Dickinson တစ်ဦးက
ကြွက်များအားဖြင့်ကိုကင်းများ၏ရေရှည်ပါးစပ်စားသုံးမှုသည်အောက်ပါ (2004) conditional လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆာအားဖြည့်။ ပြုမူနေ neuroscience 118: 1331-1339 ။
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ (2004) မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuropharmacology 47 ([ပျော့ပျောင်း 1]) 24-32 ။
2. Barrot M က,
3. ကိုယ်ပိုင် DW
(2001) ΔFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 98: 11042-11046 ။
46 ။ ↵
1. Norrholm SD က,
2. Bibb ဂျာ
4. Ouimet CC ကို,
နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ (2003) ကင်း-သွေးဆောင်ပြန့်ပွား cyclin-မှီခို kinase-5 ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည်။ neuroscience 116: 19-22 ။
1. Nye သူ,
2. BT မျှော်လင့်ပါတယ်,
3. Kelz ကို MB,
4. Iadarola M က,
အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းသဖြင့်နာတာရှည် FOS-related ကိုပဲ induction ၏စည်းမျဉ်းများ (1995) Pharmacological လေ့လာမှုများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 275: 1671-1680 ။
1. Olausson P ကို,
3. တေလာ JR
(2003) ထပ်ခါတစ်လဲလဲနီကိုတင်းထိတွေ့ကြွက်များတွင်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 28: 1264-1271 ။
(2004) ထပ်ခါတစ်လဲလဲနီကိုတင်းထိတွေ့မှုအခွအေနေအားဖြည့်နှင့်အတူတုံ့ပြန်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 173: 98-104 ။
50 ။ ↵
3. ဘန်း LH,
ယင်းနျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများအတွက် (1999) Dissociation စာစားချင်စိတ်ကို pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများနှင့် D-စိတ်ကြွဆေးများက conditional အားဖြည့်ခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအလားအလာအပေါ် core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience 19: 2401-2411 ။
4. Bamford တစ်ဦးက,
5. Fehnert B က,
6. Lachenal, G,
7. Rudarakanchana N ကို,
10 ။ Everitt BJ
mesoaccumbens dopamine function ကိုအဘို့အဂယက်: (2002) နျူကလိယ dopamine တွေပျက်စီးမှုအစာစားချင်စိတ် Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးချို့ယွင်း accumbens ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 137: 149-163 ။
1. Paxinos, G,
2. Watson ကို C
(1986) stereotaxic သြဒီနိတ် (Academic ဆစ်ဒနီ) တွင်အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်။
2. Hadeishi Y ကို,
4. Barrot M က,
5. Monteggia L ကို,
3. le Moal က M,
4. ကားရှိမုနျ H ကို
(1990) Stress- နှင့် pharmacologically-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူမှအားနည်းချက်တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res 514: 22-26 ။
3. Tessari M က,
4. Talabot-Ayer: D,
5. Hooft ဗန် Huijsduijnen R ကို,
6. Chiamulera ကို C
(1997) နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အဖြစ်များသည့်အာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ 275: 83-86 ။
(1999) မူးယစ်ဆေးစွဲ: မကောင်းတဲ့အလေ့အထတက်ထည့်ပါ။ သဘာဝတရား 398: 567-570 ။
1. ရော်ဘင်ဆင် TE,
မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ (1993) ကအာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ 18: 247-291 ။
2. Kolb B ကို
စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ (1999) ALTER ။ EUR J ကို neuroscience 11: 1598-1604 ။
2. Gorny, G,
3. Mitton အီး,
4. Kolb B ကို
(2001) ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ synapses 39: 257-266 ။
2. Pickel VM က
(1990) ကိုကြွက် medial နျူကလိယ accumbens ခုနှစ်, hippocampal နှင့် catecholaminergic ဆိပ်ကမ်း spiny အာရုံခံအပေါ်ဆုံနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှ apposition ၌ရှိကြ၏။ ဦးနှောက် Res 527: 266-279 ။
2. Impey S က,
3. မုန်တိုင်း: D,
စိတ်ကြွဆေးများက mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် CRE-mediated ကူးယူ၏ (2003) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ synapses 48: 10-17 ။
1. Smith ကအေဒီ,
(1990) ဖော်ထုတ်အာရုံခံ၏ Synaptic ဆက်သွယ်မှု၏လေ့လာမှုအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ် Basal ganglia များ၏အာရုံကြောကွန်ယက်ကို။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 13: 259-265 ။
1. Smith က-သမင်ဒရယ် SL,
2. ကယ်လီ AE
NMDA ၏ (2000) တိုက်ဆိုင်မှု activation နှင့် dopamine: D1 နျူကလီးယပ်အတွင်း receptors core ကိုအစာစားချင်စိတ်ဆာပသင်ယူမှုအဘို့လိုအပ်ပါသည် accumbens ။ J ကို neuroscience 20: 7737-7742 ။
1. တေလာ JR,
2. Horger BA ဘွဲ့
(1999) အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens စိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ် conditional အကျိုးသည်တုံ့ပြန် Enhanced ကင်းာင်းပြီးနောက် potentiated ဖြစ်ပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 142: 31-40 ။
(2001) psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးထပ်ခါတစ်လဲလဲပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင် pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူပွောငျးလဲ: ကိုကင်း, D-စိတ်ကြွဆေးနှင့် 3,4-methylenedioxymethamphetamine ၏ differential ကိုသက်ရောက်မှု ( "Ecstasy") Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 50: 137-143 ။
1. Vezina P ကို,
2. Lorraine DS,
3. အာနိုး GM က,
5. Suto N ကို
midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကို၏ (2002) အသိမြှစိတ်ကြွဆေး၏လိုက်စားအားပေးအားမြှောက်။ J ကို neuroscience 22: 4654-4662 ။
1. Werme M က,
2. Messer ကို C,
3. Olson L ကို,
4. Gilden L ကို,
5. Thoren P ကို,
7. Brene S က
(2002) ΔFosBဘီးပြေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 22: 8133-8138 ။
ယခင်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့် (2001) အခွင့်အရေးာင်း: တိုးမြှင့် cue-ဖြစ်ပေါ် sucrose ဆုလာဘ်အတွက် "လို" ။ J ကို neuroscience 21: 7831-7840 ။
69 ။ ↵
dorsolateral striatum ၏ (2004) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရလဒ်ကိုမျှော်မှန်းကိုထိန်းသိမ်းပေမယ့်ဆာပသင်ယူမှုအတွက်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးနှောင့်အယှက်။ EUR J ကို neuroscience 19: 181-189 ။
1. Zachary V ကို,
2. Bolanos, CA,
4. Theobald: D,
5. Cassidy အမတ်,
6. Kelz ကို MB,
7. Shaw-Lutchman T က,
8. Berton အို